Midowga Musharaxiinta: Farmaajo Inqilaab ayuu ku fadhiyaa Madaxtooyada | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharaxiinta: Farmaajo Inqilaab ayuu ku fadhiyaa Madaxtooyada
Kulan ay siyaasiyyinta Mucaaradka maanta ku yeesheen magaalada Mugdisho kadib ayay la hadleen saxaafadda waxa ayna faahfaahin dheeraard ah ka bixiyeen qoraal xalay kasoo baxay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Midowga Musharixiinta Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay war qoraal ah oo xalay kasoo baxay kaas oo ay ku sheegeen in aysan wixii hadda ka danbeeya Farmaajo u aqoonsaneyn Madaxweyne Soomaaliyeed.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo saxaafadda la hadalay ayaa sheegay in Farmaajo ku fashilamay inuu keeno wax heshiis siyaasadeed lagu hahay.
Waxa ay Farmaajo ku eedeeyeen in uusan marnaba ixtiraamin dastuurka dalka u yaalla, Afatiisa sano ee uu joogayna uu ku jiray xasarad abuur iyo dagaallo joogto ah, si uu u helo muddo kordhin xoog ah.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si adag ula hadlay Farmaajo ayaa yiri, “Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed in aan u sheegno Farmaajo waxa uu maanta ku fadhiyo Madaxtooyada gudaheeda waa Inqilaab dadban oo dadka ka qarsoon”.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa is weydiiyay su’aal ah “Haddii uu Farmaajo ku fashilmay in uu keeno heshiis doorasho muddo afar sano ah sidee lagu aaminayaa in muddo gaaban oo la siiyo uu xal keeni karo”.
Farmaajo iyo hay’adaha kale ee waqtigii sharciga aha ka dhamaaday ayuu Sheekh Shafiif sheegay in aan awaamiirtooda la qaadan doonin.
Sidoo kale waxa ay siyaasiyiintu hoosta ka xariiqeen in haddi uu Farmaajo dhigi waayo xilka ay maalmaha soo aaddan soo bandhiagayaan qorshahooda isla markaana ay dalka ka qabanayaan dhibaatada uu la maagan yahay.